ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွါးတာ ရှစ်လကြာလာချိန်မှာ ဒီရောဂါနဲ့ သေဆုံးရသူ ကမ္ဘာမှာ ၈ သိန်းရှိလာတဲ့အတွက် ကာကွယ်ဆေးရဖို့ အပြင်းအထန် ကြိုးစားနေတဲ့အထဲမှာ အလားအလာ ရှိတဲ့ ဆေးတွေက ဘာတွေပါလဲ။ အဏုဇီဝဗေဒ ပညာရှင် မခင်ဇာဝင်းပြည့်ကို မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးမှာပါ။
ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွါးတာ ရှစ်လကြာလာချိန်မှာ ဒီရောဂါနဲ့ သေဆုံးရသူ ကမ္ဘာမှာ ၈ သိန်းရှိလာတဲ့အတွက် ကာကွယ်ဆေးရဖို့ အပြင်းအထန် ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဒီကြားထဲအခြေနေပိုဆိုးစေနိုင်တဲ့ တကျော့ပြန် ကူးစက်မယ့် ဒုတိယလှိုင်း အန္တရာယ်ပါ ရှိနေတာကြောင့် စမ်းသပ်ဆဲ ကာကွယ်ဆေးတွေထဲက အလားအလာ ရှိတဲ့ ဆေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဏုဇီဝဗေဒ ပညာရှင် မခင်ဇာဝင်းပြည့်ကို မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးမှာပါ။
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“အလားအလာကောင်းတဲ့ ကာကွယ်ဆေး ဆိုတာကတော့ စုစုပေါင်း ၅ ခုရှိတယ် ပေါ့နော်။ ပထမဆုံး အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ US အခြေစိုက် Moderna ကုမ္ပဏီက ထုတ်တဲ့ MRNA ကာကွယ်ဆေး တခု ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ phase3ကို စခဲ့တာက ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့မှာ။ ပြီးတော့ နံပတ် ၂ ကတော့ Pfizer ရယ်၊ ဂျာမန်ကုမ္ပဏီရယ် နောက် တရုတ် ကုမ္ပဏီ တခုရယ် သူတို့ ၃ ခုပေါင်းပြီးတော့ လေ့လာစမ်းသပ် နေတာတခုရှိတယ်။ အဲဒါလည်း MRNA ကာကွယ်ဆေးပဲ။ သူတို့လည်း အဆင့် ၃ ကို အခု စပြီးတော့ စမ်းနေတယ် ပေါ့နော်။
တတိယ တခုကတော့ CanSinoBIO ဆိုတာ တရုတ်အခြေစိုက်ပါ။ သူက တရုတ်ပြည် အခြေစိုက် ဇီဝနည်းပညာ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပေမယ့် တရုတ်ပြည်စစ်တပ်နဲ့ တွဲပြီးလုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်။ စစ်တပ်မှာ ဆိုရင်တော့ ထိုးခွင့် ပေးလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူ တွေ အတွက်တော့ အဆင့် ၃ စမ်းသပ်တာက စမ်းနေတုန်းပဲ။ နောက်တခု နံပါတ် ၄ ကကျတော့ ယူကေ အခြေစိုက် University of Oxford က သူက ဆွီဒင်ကုမ္ပဏီနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ လေ့လာစမ်းသပ်နေတဲ့ဟာ။ အဲဒါလည်း အဆင့် ၃ မှာ သွားနေပါတယ်။ နောက် နံပတ် ၅ ကကျတော့ တရုတ်ပြည် အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီ တခုပဲ။ သူတို့ရဲ့. အဆင့် ၃ စမ်းသပ်တာကိုတော့ UAE မှာ စပြီးတော့ လူတွေကို စမ်းနေပြီလို့ ပြောထားတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြေနေ ဘယ်လိုရှိမယ် ဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရအုံးမှာပေါ့။ ”
မေး။. ။“ဒီ MRNA ကို အခြေတည်ပြီးတော့ စမ်းတယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုစမ်းတာလဲ ပြောပြပေးပါ။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ MRNA ဆိုတာကို မပြောခင်မှာ. ဒီ MRNA ဆိုတာက RNA ထဲက တမျိုးပဲ ပေါ့နော်။ ဆိုတဲ့အခါ ကျတော့၊ အခုအချိန်လောက်ဆို လူတော်တော်များများက ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေမှာက မျိုးဗီဇ DNA ပေါ့။ လူတွေရော ဒီသက်ရှိ သတ္တဝါတွေ တိုင်းမှာရော ဒီမျိုးဗီဇ DNA ဆိုတာက ရှိတယ်ပေါ့နော်။ ဒီ DNA ကနေပြီးတော့ ပရိုတိန်းတွေ၊ နောက် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဆဲလ် တလုံးနဲ့ တလုံး ဆက်သွယ်မှု တွေမှာ ဆိုလို့ရှိရင် အသုံးပြုမယ့်ဟာက. ပရိုတိန်းလေးတွေလို့ ခေါ်တယ်။ ပရိုတိန်းတွေ ထွက်ဖို့အတွက်ကို DNA ကနေ ပရိုတိန်း ထွက်ဖို့အတွက်ကို ခလယ်မှာ ကြားခံလုပ်ပေးရတာက RNA လို့ခေါ်တယ်။ ဒီ RNA ရှိတော့မှာ ပရိုတိန်းကို ထုတ်လို့ ရတာပေါ့နော်။
MRNA ကာကွယ်ဆေးဆိုတာက - MRNA ရဲ့ အရှည်ကောက်က မက်ဆင်ဂျာ RNA။ ဒီ RNA ၃ မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာ ဒီ မက်ဆင်ဂျာ RNA က ပရိုတိန်း ဖြစ်ဖို့ အတွက် အဓိက ပါဝင် လုပ်ပေးရတဲ့ ဟာပေါ့နော်။ သူ့ရဲ့ concept က ဘာကို အခြေခံလဲ ဆိုတော့ DNA ကို မထည့်ပဲနဲ့ MRNA ကို ထည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် ဒီ MRNA က ပရိုတိန်းကို ပြောင်းဖို့ လွယ်တယ်။ ဆိုတဲ့အခါ ကျတော့ လူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို MRNA ရောက်သွားပြီဆိုရင် ဒီ MRNA သည် ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ MRNA အပိုင်းကလေးပဲ ဖြစ်မယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ပုံစံလေး၊ ဗိုင်းရပ်စ် အတု ဖြစ်ဖို့ အတွက် အထောက်အကူပေးမယ့် MRNA လေးတခုပေါ့။ အဲဒီ MRNA တခုက ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ရောက်မယ်၊ ရောက်ပြီးသွားလို့ ရှိရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားက ဒီ MRNA ကထွက်လာတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် အတုကို ပြန်ပြီးတော့ တုန့်ပြန်လိမ့်မယ်။ အဲဒီ တုန့်ပြန်တဲ့ဟာသည် ဒီ ဗိုင်းရပ်စ် အစစ်ဝင်တဲ့ ပုံစံလိုမျိုး အတိုင်း ဖြစ်ပျက်မယ် ပေါ့နော်။ အဲဒါကြောင့် မို့လို့ ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားမှာ မှတ်ဥာဏ် ဆိုတဲ့ဟာ တခု ပေါ်လာပြီးတဲ့ အခါ ကျရင်၊ နောက် တကယ်လို့ ကိုယ်က တကယ့် ဗိုင်းရပ်စ် အစစ်နဲ့ တွေ့တဲ့ အချိန်မှာ ဒီမှတ်ဥာဏ် ကနေပြီးတော့ ဒီ ခုခံအားနဲ့ ပြန် တိုက်ထုတ်ပေးတာပေါ့။ ဒါက ကာကွယ်ဆေးရဲ့ သူ့ရဲ့ အခြေခံထားတဲ့ ဒီ MRNA ကာကွယ်ဆေးကို အခြေခံထားတဲ့ သဘောတရားကို ပြောပြတာပါ။ ”
မေး။. ။“ဆိုတော့ ကာကွယ်ဆေး တခု စိတ်ချရတယ်၊ မချရဘူး ဆိုတာ ဘယ်ပေါ်မှာ မူတည်ပါသလဲ။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. “ကာကွယ်ဆေးတခု စိတ်ချရတယ်၊ မချရဘူး ဆိုတာက ၊ ဘယ်ဆေးမဆို ဆိုးကျိုးနဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ ကို ယှဉ်ရတယ်။ အဲဒီလို ယှဉ်တဲ့အခါမှာ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးသည် မပြောပလောက်အောင်နဲပြီးတော့ ကောင်းကျိုးက ပိုပြီးတော့ အလေးသာတယ် ဆိုရင် အဲဒါမျိုးသည် ကောင်းတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတခု ဆိုပြီးတော့ ပြောရတာပေါ့။
ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး များတယ်ဆိုရင်က လူငယ်တွေ ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ ရောဂါအခံရှိသူတွေ ခံနိုင်မလား၊ ကလေးတွေ ခံနိုင်မလား။ လူကြီးတွေ ခံနိုင်မလား ဒါမျိုးတွေ ရှိလာတယ် ပေါ့နော်။ အဲဒါ အတွက်ကြောင့် မို့လို့ပါ။”
မေး။. ။“စမ်းသပ်တဲ့ အခါမှာ အဆင့်ဆင့် စမ်းရတယ် ပေါ့နော်။ အဆင့် ၃ ကျမှ စိတ်ချရတယ်လို့ ပြောလို့ ရတာပေါ့။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အဆင့် ၁ မှာက သူက လူ ဆယ်ဂဏန်းလောက်ကလေးနဲ့ ခဏ စမ်းလိုက်တယ်။ စမ်းတဲ့အခါကျရင် အဆင့် ၁ မှာက လူတွေကို ဆေးဘယ်လောက် ပေးရမလဲ ဆိုတဲ့ dosage တွေ သူတို့မှန်းတယ်။ နောက်ပြီး ဒီဟာသည် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဆိုးကျိုးတွေ ရှိသလဲ ဆိုတာကို စမ်းတာ။
နောက်ပြီး အဆင့် ၂ မှာဆို အဆင့် ၁ မှာထက် နဲနဲပိုပြီး များတဲ့ လူဦးရေ ပမာဏ ပေါ့နော် ရာဂဏန်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ထောင်ဂဏန်း တထောင်လောက် ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒီ အဆင့် ၂ ကိုရောက်သွားပြီ ဆိုရင် ဒီဟာသည် ဘယ်လောက်အထိ စိတ်ချရပြီလဲ safe ဖြစ်သလဲ။ ပေးလို့ရပြီလား၊ ဆိုတဲ့ဟာကို အဲဒါကျရင် လူအများ နဲ့ နဲနဲ ပိုစမ်းတဲ့ဟာ။ အဆင့် ၃ ကိုရောက်တဲ့ အခါကျ လူက ထောင်နဲ့ချီ ရတယ်။ ၅၀၀၀ - ၆၀၀၀ - ၇၀၀၀ တချို့ ၃ သောင်း။ အခုဒီ Moderna ဆိုရင် သူက ၃ သောင်းနဲ့စပြီး စမ်းသပ်နေတယ်လို့ ပြောတယ်။
စမ်းတဲ့ လူများလာလေလေ သူ့ရဲ့ ဆိုးကျိုးကြောင့် ဆုံးရှုံးမှု၊ ထိခိုက် နစ်နာမှု တွေ နဲလာလေလေ ပေါ့နော်။”
မေး။. ။“ရုရှားက စမ်းသပ်မှုက ဆိုလို့ရှိရင် အစိုးရကနေ ချက်ချင်းကြီး အတည်ပြုပေးလိုက်တယ်၊ ဒီလိုမျိုး အဆင့်ဆင့် စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်မလုပ် မသေချာဘူး ဆိုပြီးတော့ အခု စုံစမ်းမှုတွေ လုပ်နေရတယ်။ ဆိုတော့ ဒါမျိုးပေါ့နော်။ စိတ်ချရတယ် မချရဘူး ဆိုတာ အဲဒါပေါ်မှာ မူတည်ပြောတာလား။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျမတို့ ဖတ်ရသလောက် ဆိုရင်တော့ ရုရှားက အဆင့် ၃ ကို သူက ဒီလိုမျိုး လူဦးရေ ထောင်ဂဏန်းနဲ့ မစစ်လိုက်ပဲနဲ့ ချက်ချင်း တန်းပြီးတော့ ပေးလိုက်သလိုမျိုး ဖြစ်သွားတယ် ပေါ့နော်။ အဲဒီအခါ ကျတော့. ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ ဆိုတော့ မျှော်လင့်မထားတဲ့ case တွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ် ပေါ့နော်။ ဥပမာ ဒီ စစ်တဲ့ လူစာရင်းထဲမှာက ခုခံအားသည် ပုံစံမျိုးက တမျိုးထဲ ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ နဲနဲပဲ ကွဲပြားတာမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။ လူဦးရေ ထောင်နဲ့ချီ သွားတဲ့ အခါ ကျတော့ ခုခံအား အနိမ့်အမြင့် ပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ လူက အဖျား ဘယ်လောက် တက်မလဲ။ နောက် သူ့ရဲ့ reaction တုန့်ပြန်မှုပေါ့။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ဒီ ကာကွယ်ဆေး ဖြစ်တယ် ဆိုတာက ဗိုင်းရပ်စ် အစစ်ကို သူက ကူးနိုင်စွမ်းတို့ ရောဂါပေးနိုင်စွမ်း တို့ကို ဖယ်ထားတဲ့ ပုံစံမျိုးကို ပေး တာ ပေါ့နော်။ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ဆိုတာက။ ဆိုတော့ အနဲဆုံးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ foreign body တခု အနေနဲ့ ဝင်သွားတဲ့ အတွက်ကြောင့် မို့လို့ ခန္ဓာကိုယ်က ခုခံအားက သူ့ကို တုန့်ပြန်တယ်။ ဒီတုန့်ပြန်တဲ့အားသည် သူ့ကို အခြေနေ ဘယ်လောက်အထိ ဆိုးသွား နိုင်သလဲ၊ ဆိုကာ သူ့ကို ပြောဖို့ ဘောင်နဲနဲ ကျဉ်းသွားတယ် ပေါ့နော်။ သူတို့ရဲ့ လေ့လာမှု နဲသွားတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်မှု confidence level နဲနဲ နည်းသွားတယ် ပေါ့။”
မေး။. ။“ဒီ ကာကွယ်ဆေး တခု ကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူး ဆိုတာ ဘယ်လို ပြောနိုင်ပါသလဲ။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ကောင်းတဲ့ ကာကွယ်ဆေး ဆိုတဲ့ ဟာသည် အကျိုး တကယ်ရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေ လည်း နဲတယ် ပေါ့နော်။ အဲဒါ ၂ ခု ပြည့်စုံမှသာ ဒီဟာကို ပြည်သူတွေကို ပေးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ကာကွယ်ဆေးကောင်း တခု ဖြစ်မယ်ပေါ့။ အကျိုးရှိတယ် ဆိုတာက တကယ်ကော အလုပ်လုပ်သလား၊ တော်ကြာနေ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးလည်း မရှိဘူး။ တကယ်လည်း အလုပ်မလုပ်ဖူး။ ကူးလာတဲ့ အခါကျရင်တော့ ခံလိုက်မယ်ဆို။ အဲဒီအခါမျိုး ကျ မထိုးတာနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် အကျိုးလည်း ရှိရမယ်။ နောက် ဘယ်နှစ်ခါ ထိုးရမှာလဲ ပေါ့နော်။ အခု Moderna ဆိုရင် သူက နောက်ဆုံးသိရတာက သူ့ဆို ၂ ခါ ဆင့် ထိုးရမှာ ပေါ့နော်။ အဲဒီလိုမျိုး ဘယ်လိုပုံစံမျိုး ပေးမှာလဲ dosage ဘယ်လောက်ပေးမှာလည်း။ ဒါမျိုးတွေ အသေအချာ တိတိကျကျ ထွက်ထားပြီ ဆိုတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတခု သာလျှင် ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ လည်း ယုံယုံကြည်ကြည် စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ ထိုးနိုင်မယ်ပေါ့။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်ရဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ပဲ ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာ ကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နား လိုက်ပါရစေ။
ကိုဗဈ ၁၉ ကပျရောဂါ ဖွဈပှါးတာ ရှဈလကွာလာခြိနျမှာ ဒီရောဂါနဲ့ သဆေုံးရသူ ကမ်ဘာမှာ ၈ သိနျးရှိလာတဲ့အတှကျ ကာကှယျဆေးရဖို့ အပွငျးအထနျ ကွိုးစားနကွေပါတယျ။ ဒီကွားထဲ အခွနေပေိုဆိုးစနေိုငျတဲ့ တကြော့ပွနျ ကူးစကျမယျ့ ဒုတိယလှိုငျး အန်တရာယျပါ ရှိနတောကွောငျ့ စမျးသပျဆဲ ကာကှယျဆေးတှထေဲက အလားအလာ ရှိတဲ့ ဆေးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး အဏုဇီဝဗဒေ ပညာရှငျ မခငျဇာဝငျးပွညျ့ကို မေးမွနျးပွီး တငျပွပေးမှာပါ။
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“အလားအလာကောငျးတဲ့ ကာကှယျဆေး ဆိုတာကတော့ စုစုပေါငျး ၅ ခုရှိတယျ ပေါ့နျော။ ပထမဆုံး အနနေဲ့ ဆိုရငျတော့ US အခွစေိုကျ Moderna ကုမ်ပဏီက ထုတျတဲ့ MRNA ကာကှယျဆေး တခု ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ phase3ကို စခဲ့တာက ဇူလိုငျလ ၂၇ ရကျနမှေ့ာ။ ပွီးတော့ နံပတျ ၂ ကတော့ Pfizer ရယျ၊ ဂြာမနျကုမ်ပဏီရယျ နောကျ တရုတျ ကုမ်ပဏီ တခုရယျ သူတို့ ၃ ခုပေါငျးပွီးတော့ လလေ့ာစမျးသပျ နတောတခုရှိတယျ။ အဲဒါလညျး MRNA ကာကှယျဆေးပဲ။ သူတို့လညျး အဆငျ့ ၃ ကို အခု စပွီးတော့ စမျးနတေယျ ပေါ့နျော။
တတိယ တခုကတော့ CanSinoBIO ဆိုတာ တရုတျအခွစေိုကျပါ။ သူက တရုတျပွညျ အခွစေိုကျ ဇီဝနညျးပညာ ကုမ်ပဏီ ဖွဈပမေယျ့ တရုတျပွညျစဈတပျနဲ့ တှဲပွီးလုပျတဲ့ဟာပေါ့နျော။ စဈတပျမှာ ဆိုရငျတော့ ထိုးခှငျ့ ပေးလိုကျပွီလို့ သိရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပွညျသူ တှေ အတှကျတော့ အဆငျ့ ၃ စမျးသပျတာက စမျးနတေုနျးပဲ။ နောကျတခု နံပါတျ ၄ ကကတြော့ ယူကေ အခွစေိုကျ University of Oxford က သူက ဆှီဒငျကုမ်ပဏီနဲ့ ပူးပေါငျးပွီးတော့ လလေ့ာစမျးသပျနတေဲ့ဟာ။ အဲဒါလညျး အဆငျ့ ၃ မှာ သှားနပေါတယျ။ နောကျ နံပတျ ၅ ကကတြော့ တရုတျပွညျ အခွစေိုကျ ကုမ်ပဏီ တခုပဲ။ သူတို့ရဲ့. အဆငျ့ ၃ စမျးသပျတာကိုတော့ UAE မှာ စပွီးတော့ လူတှကေို စမျးနပွေီလို့ ပွောထားတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခွနေေ ဘယျလိုရှိမယျ ဆိုတာကိုတော့ စောငျ့ကွညျ့ရအုံးမှာပေါ့။ ”
မေး။. ။“ဒီ MRNA ကို အခွတေညျပွီးတော့ စမျးတယျ ဆိုတာ ဘယျလိုစမျးတာလဲ ပွောပွပေးပါ။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ ဟုတျကဲ့ပါ။ MRNA ဆိုတာကို မပွောခငျမှာ. ဒီ MRNA ဆိုတာက RNA ထဲက တမြိုးပဲ ပေါ့နျော။ ဆိုတဲ့အခါ ကတြော့၊ အခုအခြိနျလောကျဆို လူတျောတျောမြားမြားက ရငျးနှီးကြှမျးဝငျနမှောက မြိုးဗီဇ DNA ပေါ့။ လူတှရေော ဒီသကျရှိ သတ်တဝါတှေ တိုငျးမှာရော ဒီမြိုးဗီဇ DNA ဆိုတာက ရှိတယျပေါ့နျော။ ဒီ DNA ကနပွေီးတော့ ပရိုတိနျးတှေ၊ နောကျ လူ့ခန်ဓာကိုယျထဲက ဆဲလျ တလုံးနဲ့ တလုံး ဆကျသှယျမှု တှမှော ဆိုလို့ရှိရငျ အသုံးပွုမယျ့ဟာက. ပရိုတိနျးလေးတှလေို့ ချေါတယျ။ ပရိုတိနျးတှေ ထှကျဖို့အတှကျကို DNA ကနေ ပရိုတိနျး ထှကျဖို့အတှကျကို ခလယျမှာ ကွားခံလုပျပေးရတာက RNA လို့ချေါတယျ။ ဒီ RNA ရှိတော့မှာ ပရိုတိနျးကို ထုတျလို့ ရတာပေါ့နျော။
MRNA ကာကှယျဆေးဆိုတာက - MRNA ရဲ့ အရှညျကောကျက မကျဆငျဂြာ RNA။ ဒီ RNA ၃ မြိုးရှိတဲ့ထဲမှာ ဒီ မကျဆငျဂြာ RNA က ပရိုတိနျး ဖွဈဖို့ အတှကျ အဓိက ပါဝငျ လုပျပေးရတဲ့ ဟာပေါ့နျော။ သူ့ရဲ့ concept က ဘာကို အခွခေံလဲ ဆိုတော့ DNA ကို မထညျ့ပဲနဲ့ MRNA ကို ထညျ့လိုကျမယျ ဆိုရငျ ဒီ MRNA က ပရိုတိနျးကို ပွောငျးဖို့ လှယျတယျ။ ဆိုတဲ့အခါ ကတြော့ လူရဲ့ ခန်ဓာကိုယျထဲကို MRNA ရောကျသှားပွီဆိုရငျ ဒီ MRNA သညျ ဗိုငျးရပျဈရဲ့ MRNA အပိုငျးကလေးပဲ ဖွဈမယျ။ ဗိုငျးရပျဈရဲ့ ပုံစံလေး၊ ဗိုငျးရပျဈ အတု ဖွဈဖို့ အတှကျ အထောကျအကူပေးမယျ့ MRNA လေးတခုပေါ့။ အဲဒီ MRNA တခုက ခန်ဓာကိုယျထဲကို ရောကျမယျ၊ ရောကျပွီးသှားလို့ ရှိရငျ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ခုခံအားက ဒီ MRNA ကထှကျလာတဲ့ ဗိုငျးရပျဈ အတုကို ပွနျပွီးတော့ တုနျ့ပွနျလိမျ့မယျ။ အဲဒီ တုနျ့ပွနျတဲ့ဟာသညျ ဒီ ဗိုငျးရပျဈ အစဈဝငျတဲ့ ပုံစံလိုမြိုး အတိုငျး ဖွဈပကျြမယျ ပေါ့နျော။ အဲဒါကွောငျ့ မို့လို့ ဒီခန်ဓာကိုယျရဲ့ ခုခံအားမှာ မှတျဉာဏျ ဆိုတဲ့ဟာ တခု ပျေါလာပွီးတဲ့ အခါ ကရြငျ၊ နောကျ တကယျလို့ ကိုယျက တကယျ့ ဗိုငျးရပျဈ အစဈနဲ့ တှတေဲ့ အခြိနျမှာ ဒီမှတျဉာဏျ ကနပွေီးတော့ ဒီ ခုခံအားနဲ့ ပွနျ တိုကျထုတျပေးတာပေါ့။ ဒါက ကာကှယျဆေးရဲ့ သူ့ရဲ့ အခွခေံထားတဲ့ ဒီ MRNA ကာကှယျဆေးကို အခွခေံထားတဲ့ သဘောတရားကို ပွောပွတာပါ။ ”
မေး။. ။“ဆိုတော့ ကာကှယျဆေး တခု စိတျခရြတယျ၊ မခရြဘူး ဆိုတာ ဘယျပျေါမှာ မူတညျပါသလဲ။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. “ကာကှယျဆေးတခု စိတျခရြတယျ၊ မခရြဘူး ဆိုတာက ၊ ဘယျဆေးမဆို ဆိုးကြိုးနဲ့ ကောငျးကြိုးနဲ့ ကို ယှဉျရတယျ။ အဲဒီလို ယှဉျတဲ့အခါမှာ ဘေးထှကျ ဆိုးကြိုးသညျ မပွောပလောကျအောငျနဲပွီးတော့ ကောငျးကြိုးက ပိုပွီးတော့ အလေးသာတယျ ဆိုရငျ အဲဒါမြိုးသညျ ကောငျးတဲ့ ကာကှယျဆေးတခု ဆိုပွီးတော့ ပွောရတာပေါ့။
ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုး မြားတယျဆိုရငျက လူငယျတှေ ခံနိုငျတယျဆိုရငျတောငျမှ ရောဂါအခံရှိသူတှေ ခံနိုငျမလား၊ ကလေးတှေ ခံနိုငျမလား။ လူကွီးတှေ ခံနိုငျမလား ဒါမြိုးတှေ ရှိလာတယျ ပေါ့နျော။ အဲဒါ အတှကျကွောငျ့ မို့လို့ပါ။”
မေး။. ။“စမျးသပျတဲ့ အခါမှာ အဆငျ့ဆငျ့ စမျးရတယျ ပေါ့နျော။ အဆငျ့ ၃ ကမြှ စိတျခရြတယျလို့ ပွောလို့ ရတာပေါ့။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ဟုတျကဲ့ပါ။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ အဆငျ့ ၁ မှာက သူက လူ ဆယျဂဏနျးလောကျကလေးနဲ့ ခဏ စမျးလိုကျတယျ။ စမျးတဲ့အခါကရြငျ အဆငျ့ ၁ မှာက လူတှကေို ဆေးဘယျလောကျ ပေးရမလဲ ဆိုတဲ့ dosage တှေ သူတို့မှနျးတယျ။ နောကျပွီး ဒီဟာသညျ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဆိုးကြိုးတှေ ရှိသလဲ ဆိုတာကို စမျးတာ။
နောကျပွီး အဆငျ့ ၂ မှာဆို အဆငျ့ ၁ မှာထကျ နဲနဲပိုပွီး မြားတဲ့ လူဦးရေ ပမာဏ ပေါ့နျော ရာဂဏနျး ဖွဈနိုငျတယျ။ ထောငျဂဏနျး တထောငျလောကျ ဖွဈနိုငျတယျ။ အဲဒီ အဆငျ့ ၂ ကိုရောကျသှားပွီ ဆိုရငျ ဒီဟာသညျ ဘယျလောကျအထိ စိတျခရြပွီလဲ safe ဖွဈသလဲ။ ပေးလို့ရပွီလား၊ ဆိုတဲ့ဟာကို အဲဒါကရြငျ လူအမြား နဲ့ နဲနဲ ပိုစမျးတဲ့ဟာ။ အဆငျ့ ၃ ကိုရောကျတဲ့ အခါကြ လူက ထောငျနဲ့ခြီ ရတယျ။ ၅၀၀၀ - ၆၀၀၀ - ၇၀၀၀ တခြို့ ၃ သောငျး။ အခုဒီ Moderna ဆိုရငျ သူက ၃ သောငျးနဲ့စပွီး စမျးသပျနတေယျလို့ ပွောတယျ။
စမျးတဲ့ လူမြားလာလလေေ သူ့ရဲ့ ဆိုးကြိုးကွောငျ့ ဆုံးရှုံးမှု၊ ထိခိုကျ နဈနာမှု တှေ နဲလာလလေေ ပေါ့နျော။”
မေး။. ။“ရုရှားက စမျးသပျမှုက ဆိုလို့ရှိရငျ အစိုးရကနေ ခကျြခငျြးကွီး အတညျပွုပေးလိုကျတယျ၊ ဒီလိုမြိုး အဆငျ့ဆငျ့ စမျးသပျမှုတှေ လုပျမလုပျ မသခြောဘူး ဆိုပွီးတော့ အခု စုံစမျးမှုတှေ လုပျနရေတယျ။ ဆိုတော့ ဒါမြိုးပေါ့နျော။ စိတျခရြတယျ မခရြဘူး ဆိုတာ အဲဒါပျေါမှာ မူတညျပွောတာလား။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ဟုတျကဲ့ပါ။ ကမြတို့ ဖတျရသလောကျ ဆိုရငျတော့ ရုရှားက အဆငျ့ ၃ ကို သူက ဒီလိုမြိုး လူဦးရေ ထောငျဂဏနျးနဲ့ မစဈလိုကျပဲနဲ့ ခကျြခငျြး တနျးပွီးတော့ ပေးလိုကျသလိုမြိုး ဖွဈသှားတယျ ပေါ့နျော။ အဲဒီအခါ ကတြော့. ဘာတှေ ဖွဈနိုငျသလဲ ဆိုတော့ မေြျှာလငျ့မထားတဲ့ case တှေ ဖွဈလာနိုငျတယျ ပေါ့နျော။ ဥပမာ ဒီ စဈတဲ့ လူစာရငျးထဲမှာက ခုခံအားသညျ ပုံစံမြိုးက တမြိုးထဲ ဖွဈခငျြ ဖွဈနိုငျတယျ။ နဲနဲပဲ ကှဲပွားတာမြိုး ဖွဈနိုငျတယျ။ လူဦးရေ ထောငျနဲ့ခြီ သှားတဲ့ အခါ ကတြော့ ခုခံအား အနိမျ့အမွငျ့ ပျေါမှာ မူတညျပွီးတော့ လူက အဖြား ဘယျလောကျ တကျမလဲ။ နောကျ သူ့ရဲ့ reaction တုနျ့ပွနျမှုပေါ့။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ ဒီ ကာကှယျဆေး ဖွဈတယျ ဆိုတာက ဗိုငျးရပျဈ အစဈကို သူက ကူးနိုငျစှမျးတို့ ရောဂါပေးနိုငျစှမျး တို့ကို ဖယျထားတဲ့ ပုံစံမြိုးကို ပေး တာ ပေါ့နျော။ ရောဂါ ကာကှယျဆေး ဆိုတာက။ ဆိုတော့ အနဲဆုံးတော့ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ foreign body တခု အနနေဲ့ ဝငျသှားတဲ့ အတှကျကွောငျ့ မို့လို့ ခန်ဓာကိုယျက ခုခံအားက သူ့ကို တုနျ့ပွနျတယျ။ ဒီတုနျ့ပွနျတဲ့အားသညျ သူ့ကို အခွနေေ ဘယျလောကျအထိ ဆိုးသှား နိုငျသလဲ၊ ဆိုကာ သူ့ကို ပွောဖို့ ဘောငျနဲနဲ ကဉျြးသှားတယျ ပေါ့နျော။ သူတို့ရဲ့ လလေ့ာမှု နဲသှားတဲ့ အခြိနျမှာ ကိုယျ့ရဲ့ ယုံကွညျမှု confidence level နဲနဲ နညျးသှားတယျ ပေါ့။”
မေး။. ။“ဒီ ကာကှယျဆေး တခု ကောငျးတယျ၊ မကောငျးဘူး ဆိုတာ ဘယျလို ပွောနိုငျပါသလဲ။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ကောငျးတဲ့ ကာကှယျဆေး ဆိုတဲ့ ဟာသညျ အကြိုး တကယျရှိတယျ။ နောကျပွီးတော့ ဘေးထှကျ ဆိုးကြိုးတှေ လညျး နဲတယျ ပေါ့နျော။ အဲဒါ ၂ ခု ပွညျ့စုံမှသာ ဒီဟာကို ပွညျသူတှကေို ပေးနိုငျတယျ ဆိုတဲ့ ကာကှယျဆေးကောငျး တခု ဖွဈမယျပေါ့။ အကြိုးရှိတယျ ဆိုတာက တကယျကော အလုပျလုပျသလား၊ တျောကွာနေ ဘေးထှကျ ဆိုးကြိုးလညျး မရှိဘူး။ တကယျလညျး အလုပျမလုပျဖူး။ ကူးလာတဲ့ အခါကရြငျတော့ ခံလိုကျမယျဆို။ အဲဒီအခါမြိုး ကြ မထိုးတာနဲ့ အတူတူပဲ ဖွဈတဲ့ အတှကျကွောငျ့ အကြိုးလညျး ရှိရမယျ။ နောကျ ဘယျနှဈခါ ထိုးရမှာလဲ ပေါ့နျော။ အခု Moderna ဆိုရငျ သူက နောကျဆုံးသိရတာက သူ့ဆို ၂ ခါ ဆငျ့ ထိုးရမှာ ပေါ့နျော။ အဲဒီလိုမြိုး ဘယျလိုပုံစံမြိုး ပေးမှာလဲ dosage ဘယျလောကျပေးမှာလညျး။ ဒါမြိုးတှေ အသအေခြာ တိတိကကြ ထှကျထားပွီ ဆိုတဲ့ ကာကှယျဆေးတခု သာလြှငျ ပွညျသူတှေ အနနေဲ့ လညျး ယုံယုံကွညျကွညျ စိတျခမျြးခမျြးသာသာနဲ့ ထိုးနိုငျမယျပေါ့။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့ရဲ့ ပွောကွားခကျြနဲ့ပဲ ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပံနဲ့နညျးပညာ ကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနား လိုကျပါရစေ။
COVID-19 ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှု ပြည်တွင်းဘာသာပေါင်းစုံ ရင်ဆိုင်နေရ